Odayaasha iyo Waxgaradka Galmudug oo ka hadlay xaalada Amaandari ee halkaas – SBC
Odayaasha iyo Waxgaradka Galmudug oo ka hadlay xaalada Amaandari ee halkaas
Posted by Webmaster on February 2, 2012 Comments
Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka maamul goboleedka Galmudug ee gobolkaasi Mudug ayaa kulamo ay ku qaateen magaalada gaalkacyo waxa ay ugaga hadleen xaaladaha Amaan dari ee maalmihii ugu dambeysay ku soo badanaya maamul gobolkeedkaasi .
Odayaasha iyo waxqaradka ayaa arintani ka muujiyay walaac iyagoona ku tilmaamay mid aan loo dulqaadan karin iyadoona ay dheceen 24kii saac ee la soo dhaafay falal amaan xumo ah oo ay dad ku geeriyoodeen.
sidoo kale waxgaradka waxa ay kulankooda ku dalbadeen in amaanka sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sugaan ciidamada Amaanka Maamulka iyagoona u sheegay in loogabahan yahay ka hortaga waxyaaabaha amaanka wax u dhimaya.
Waxay kulankooda sidoo kale ugu baaqeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dhinacyada ku howlan arimaha amaanka ay siweyn isaga xilsaaraan amaanka.
Dhecdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Gaalkacyo ayaa waxaa lagu dilay mid ka mid ahaa digtoorada isbitalka dhanka Maamul gobokeedka Galmudug, iyo fal lagu rasaaseeyay gaadiid rakaab.